Fiovana ho amin’ny tsara… | NewsMada
Fiovana ho amin’ny tsara…
Ahoana koa ny manaraka? Ny tohin’ny toe-draharaham-pirenena io. Antenaina hisy amin’izay ny fitoniana sy ny filaminana maharitra. Mba hiatrehana amin’izay ny tena fanarenam-pirenena sy fampandrosoana. Nilaza rahateo ny filoha vaovao ny Repoblika fa hiasa mafy hisian’ny fampandrosoana isan-tokantrano manerana an’i Madagasikara.
Ho araka ny tena hetahetam-bahoaka any ifotony amin’izay ny atao sy ny imasoana? Maika amin’izao, ohatra, ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fanamaivanana ny fidangan’ny vidim-piainana, ny famahana ny ady sy ny fandrobana tany etsy sy eroa… Tena ho tsapan’ny vahoaka ny hoe fiovam-piainana ho amin’ny tsaratsara kokoa.
Handeha ho azy fotsiny amin’izao ve izany? Na avela hiasa irery na hanao izay saim-pantany ny mpitondra… Na eo aza ny tamberin’andraikitra takina amin’ny mpitondra, mila mandray anjara amin’ny raharaham-pirenena ny vahoaka fa tsy vitan’ny hoe fandatsaham-bato tamin’ny fifidianana, dia miandry asa vita amin’izay hoe fampandrosoana.
Hahay sy hiroso amin’izay fampandraisana anjara ny vahoaka ifotony amin’ny hoe asa fanarenam-pirenena sy fampandrosoana izay ve ny mpitondra? Mila politika mazava io. Ho tena tsapa sy iainan’ny vahoaka fa tompon-draharaha izy; saropiaro amin’ny tanindrazany sy ny harena ao aminy fa tsy ho mpitazam-potsiny na tsy miraharaha…
Amin’izany, milaza mazava ny raharaha. Mby amin’ilay hoe: atao izay lazaina, lazaina izay atao. Amin’izany ihany koa, tena hanana ny toerany ary hanao ny asany amin’ny ara-dalàna amin’izay ny mpanohitra: tsy mitetika handrava fitondrana na entim-pankahalana fa hiasa na hitsikera ho amin’ny fanarenana sy ny tombontsoam-pirenena.
Hazava amin’izany ahay ny hoe: iza no manao inona? Tsy fahavalom-pirenena na mpanongam-panjakana ny mpanohitra, ary tsy hoe tompon’ny tany sy ny fanjakana samy irery ny mpitondra ka hanao izay saim-pantany. Mba hisy amin’izay ny fiovana amin’izao hoe fitondrana vaovao izao? Fiovana ho amin’ny tsara ahay…